Baaq Diaspora sitti ka socdaa; Cc:Ugaaska iyo Gendaha Beesha Ciise – Xeernews24
Baaq Diaspora sitti ka socdaa; Cc:Ugaaska iyo Gendaha Beesha Ciise
28. April 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Kacdoonka xaq u dirir ah ee maalmahan ka socda Gobolka Sitti ayaa wali halkii kasii socda.
Shicibka gobolka waa ay ka go’antahay inay sii wadaan kacdoonka ilaa ay helaan xaqoodii iyo inta ay iska dulqaadayaan huwanta dulmiga ku haysa shicibkooda.
Waxaan ka warqabnaa in la filaayo in uu Abdi Mohamoud Omar soo gaadhi doono gobolka Sitti lana kulmi doono Ugaaska iyo shicibka labada.
Ķadib markii ay guul daraysteen nimankii madaxwayne ku xigeenada u kala danbeeyay iyo wasiiradii gobolka kasoo jeeday ee kala ahaa
Abdihakim Cigaal–fired vice president
Hamdi new appointed vice president
Iyo xubno kale ayaguna kasoo jeedda gobolka.
Hadaba waxaan rabaa inaan talo usoo jeediyo xubnaha u hadli doona gobolka cabashadiisa inay codsigooda u gudbiyaan si cad oo ay soo bandhigaan dhamaan cabashadooda oo aan isleehay talo ahaan waxaa ka mid ah qodobadan soo socda::
1-inuu raali galin ka bixiyo beentii uu ugaaska u sheegay iyo falalkii uu ka fuliyay gobolka Sitti dhamaantood ee ay ka mid yihiin xadhiga dhalinta iyo cuqaasha.
2-in nidaamkan dib u curashada isla maalintaa la laabo loona soo celiyo shaqaalihii gobolka u dhashay.
3-in Magaalooyinkii uu canfar ku deeqay ee ahaa ;Cundhufo, Cadaytu, Dan-La Hely, iyo Gadhmalu in uu kusoo celiyo halkoodii.
4-inuu xilka madaxwayne ku xigeen ee Beesha Ciise xaqa u lahaa uu kusoo celiyo halkii madaxdii ka horaysay ay siin jireen oo uuna kala diro labada madaxwayne ku xigeen ee uu ka garab samaystay.
5-in uu Beesha xaqeeda iyo sharafteeda dhawro uuna u magacaabo madaxwayne ku xigeen kaliya
Lehna awoodii madaxwayne ku xigeen
Kana daayo Beesha xilkan magac u yaalka ah ee uu la caadaystay.
6-in uu awood qaybsi buuxda iyo kaalin mugleh kasiiyo xubnaha xisbiga dhexe qaybihiisa kala duwan sida fulinta i.w.m
7-Waa inuu Beesha u magacaabo wasiirada tayo leh una dhiibo xilalka wasiirada kaalinta koowaad ee muhiimka ah.
8-Waa in uu sidoo kale sadkii beesha uu kasiiyo laamaha muhiimka ah ee xukumada ee ku xiga xilalka wasiirada sida hogaanada,wasiir ku xigeenada,madax xafiiseedada iyo dhamaan laama haayadaha dawlada qaybaheeda kala duwan.
9-waa in uu xaqii beesha ee dhanka saraakiisha ciidamada u siiyo sida Police i.w.m sidoo kale ragii saraakiisha ahaa ee ciise la aasay lasoo faqo mooraalkoodiina dib loo soo nooleeyo.
10-in Aqoon yahanii shaqooyinkooda sida xaqdarada ah looga soo cayriyay loo yeedho lagana shaqo galiyo gobolkooda Sitti si shuruuc la’aan ah.
11-in Gobolka laga fuliyo dhamaan mashaariicda laga fuliyay gobolada kale ee dawlad deegaanka somalida ethiopia sida ugu dhakhso badan.
12-in la tixgaliyo xaqa bulshada ku nool gobolka Sitti lagana qayb galiyo jaanis kasta oo kasoo baxa Dawlad Deegaanka Somalida Ethiopia sida deeqaha waxbarasho qaybaheeda kala duwan,sida fursadaha tababarada i.w.m
13-in laga qayb galiyo xubnaha matala kilalka 5aad ee heer federal loo magacaabo sida wasiirada,safaaradaha iyo dhamaan heer xilalka heer federal.
14-in la ixtiraamo shicibka cida matasha loona dhaafin ayagana lagala xisaabtamo.
15-in magacaabista xilalka sar sare sida hogaanada ilaa heer wasiir uu noqdo mid ku yimaada wadashi xeel dheer iyo hawl karnimo,aqoon,Hibo hogaaneed intaba kana reebanaado maanta laga bilaabo sida uu hada ku xusho oo ah keebaa ii hogaansanaan kara aniga ,oo aan ina waydiin karin xaqii gobolka uu kasoo jeedo.
16-in Gobolka balaadhan ee sitti laga dhigo sadex gobol iyo degmooyinkoodii maadaama oo marar badan oo la kordhiyay gobolada kale laga reebay gobolka sotti
Ugu dambayntii hadii Abdi Mohamoud Omar uu jawaabo iyo ficilo u cuntanta ugaaska iyo shicibka kasiiyo su’aalhaas oodana ka qaado dadka jeelalka ku xidhxidhan kana dulqaado gobolka sitti dadkan ku yimid dib u curashada waa suuro gal in wax lala wadaago lana heshiiyo.
Hadii kale waxaa iga talo ah inaan xaqeena u raadsano heer federal kana codsano dawlada federalka inay gobol beesha u gaar ah noo aqoonsadaan.
Waxaa lagama maarmaan ah in cidkasta oo tacadi iyo xad gudub ka gaysata gobolka Shiniile la horkeeni doono cadaalada marnaba kama seexan doono la xisaabtanka cidii dadkayaga dhib u gaysata.
Waxkasta iyo talaabo kasta waa qoran tahay waana xafidan tahay.
Qore aqoon yahan
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/BAAQ.png 359 500 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-28 11:09:072018-04-28 11:29:49Baaq Diaspora sitti ka socdaa; Cc:Ugaaska iyo Gendaha Beesha Ciise
NEWS: RARE PROTESTS HIT ETHIOPIAN SOMALI REGIONAL STATE AS ACCUSATIONS OF ENDEMIC... Wararkii ugu Dambeeyey ee barbaarta Sitti.